WhatsApp ကို "Facebook မှ" နှင့်မှောင်မိုက်သောဆောင်ပုဒ်၏နိမိတ်လက္ခဏာများကိုတွေ့မြင်ပြီးဖြစ်သည် Androidsis
“ From Facebook” သည် WhatsApp တံဆိပ်အသစ်နှင့်အမှောင်ထု၏အမှတ်အသားများတွင်ပေါ်နေသည်
ဘယ်မှာနိုင်ငံများစွာရှိပါတယ် WhatsApp ကို Facebook မှမသိပါ။ ဤအကြောင်းကြောင့်ပင်ယခု မှစ၍ သင်သည် Facebook ဟူသောအမည်ရှိသော WhatsApp အက်ပလီကေးရှင်း၏နေရာအမျိုးမျိုးတွင်မြင်တွေ့ရလိမ့်မည်။ ဒါဆိုဘယ်သူမှမေ့မှာမဟုတ်ဘူး
Facebook က၎င်း၏ရည်ရွယ်ချက်ကိုမကြာသေးမီကကြေငြာခဲ့သည် Instagram နှင့် WhatsApp တို့နှစ် ဦး စလုံးဖြစ်သည် ကြောင်းဖော်ပြထားခြင်းရှိခဲ့ပါတယ် အသုံးပြုသူများက၎င်းသည်ပိုင်ဆိုင်ကြောင်းသိသည် လူမှုကွန်ယက်၏။ ထိုကဲ့သို့သောသတင်းအချက်အလက်ကိုသတိမထားမိသောအခြားသူများကိုအံ့အားသင့်စေနိုင်သည့်အသစ်အဆန်းတစ်ခု။
သင်သည်သင်၏ WhatsApp ကိုယခုဖွင့်လျှင် သင် Settings သို့သွားပါ၊ သင်သည်အောက်ခြေတွင်တွေ့လိမ့်မည် the « Facebook ၏ WhatsApp ကို»။ လာပါ၊ လူကြိုက်အများဆုံး messaging app သည်အလွန်ရှင်းလင်းသည်။ ၎င်းသည်လူမှုကွန်ယက်မကြာသေးမီကကြေညာသကဲ့သို့ဖြစ်သည်။
ငါတို့ကိုဘာအံ့အားသင့်စေသလဲ အရာအားလုံးဟာမကြာခင်မှာမှောင်မိုက်တဲ့ mode ရှိနေပြီဆိုတာကို ဦး တည်နေပုံရသည် WhatsApp ကိုအပေါ်။ ဤမက်ဆေ့ခ်ျပို့ခြင်းအက်ပ်တွင်မြင်ရမည့်အကြီးမားဆုံးသတင်းတစ်ခုအဖြစ်မှောင်မိုက်သောအကြောင်းအရာနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းများစွာရှိပြီးဖြစ်သည်။
အမှန်စင်စစ်၊ အချို့သုံးစွဲသူများသည်၎င်းတို့မှ system မှ၎င်းတို့၏ terminal တွင်အမှောင်မုဒ်ကိုတက်ကြွစွာလုပ်ဆောင်နေချိန်တွင်၎င်းတို့သည် Android9နှင့် Android 10 အောက်တွင်ရှိနေသမျှကာလပတ်လုံး၊ မူလမြင်ကွင်း၊ desktop ဝစ်ဂျက်နှင့်နောက်ခံစကားပြောခန်းများ, သူတို့သည်မည်သည့်လှည့်ကွက်မျိုးလုပ်စရာမလိုဘဲမှောင်မိုက်ဗားရှင်းသို့ပြောင်းပါလိမ့်မယ်။
ငါတို့မှာရှိတယ် နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်း 2.19.330 သို့အက်ပလီကေးရှင်းကိုအဆင့်မြှင့်တင် နှင့်စနစ်မှ၎င်းကိုဖွင့်သောအခါမှောင်မိုက်သောအခင်းအကျင်းရှိချက်တင်ကိုကျွန်ုပ်တို့မတွေ့ရပါ။ လာမယ့်မွမ်းမံမှုများတွင်မှောင်မိုက်သည့်ဆောင်ပုဒ်သည်နောက်ဆုံး၌ရောက်ရှိလာမည်ဖြစ်သောကြောင့်အထင်ရှားဆုံးအမှတ်အသားကားအဘယ်နည်း။ ညအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏မိုဘိုင်းဖုန်းသည်ပိုးစုန်းကြူးနှင့်တူမည်မဟုတ်။
ယခုဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါ Play Store မှနောက်ဆုံးထုတ် WhatsApp update ကို နှင့်အနက်ရောင် splash မျက်နှာပြင်ကိုရှာဖွေ; ဟုတ်တယ်၊ မင်းမြင်ချင်ရင်မှောင်မိုက်တဲ့ mode ကိုဖွင့်ဖို့သတိရပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » “ From Facebook” သည် WhatsApp တံဆိပ်အသစ်နှင့်အမှောင်ထု၏အမှတ်အသားများတွင်ပေါ်နေသည်
ALERT !!: HowarJran အက်ပ်များကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးသည်။ အမှိုက်မရှိဘူး !!